Kungenzeka yini ukuthi udle ama-sitrobheli ezigulini ezinesifo sikashukela sohlobo 2 > Ukudla ngesifo sikashukela
Kungenzeka yini ukuthi udle ama-sitrobheli ezigulini ezinesifo sikashukela sohlobo 2
I-Strawberry iyijikijolo ehlobo, ukuvuthwa kwayo ngesineke ngokulinganayo ilinde abantu abadala nezingane. Muhle, umnandi futhi unephunga elimnandi, ngakho-ke, ukuhlobisa kwetafula elihle kakhulu. Kepha sitrobheli siwuthinta kanjani umzimba womuntu onesifo sikashukela sohlobo 2? Kungenzeka ukuthi usisebenzise, ​​ngoba uhlobo lwesifo esincike e-insulin sidinga ukuthi onesifo sikashukela akhethe lapho ekhetha imikhiqizo yemenyu yakhe. Lapho uhlanganisa ukudla nokubandakanya izithelo namajikijolo, kubalulekile ukunaka okuqukethwe kwawo ushukela. I-Strawberry isho imikhiqizo enenkomba ye-glycemic ephansi, ngakho-ke kukhululekile ukuhlukanisa itafula lesifo sikashukela sesiguli.
Ama-Strawberry ane-Vitamin ecebile nokwakhiwa kwamaminerali, ngakho-ke kufanele isifo sikashukela ekudleni. Ayilimazi futhi ayikhulisi izinga le-glucose egazini, kodwa kunalokho ilawula. 100g umkhiqizo uqukethe:
amanzi 86 g
i-acid acid eyi-1.3g,
Ngaphezu kwalokho, i-berry ine-ascorbic acid eminingi, ebaluleke kakhulu ekuqiniseni imithambo yegazi, amavithamini e-B (B3, B9), i-tocopherol (vit. E), A. Strawberries isebenze izinqubo ze-metabolic emzimbeni, sibonga ama-antioxidants akulo. Yibona abavamisa amazinga aphezulu kashukela egazini nomchamo, bahlanze umzimba wezinto eziyingozi.
I-berry iqukethe izinto ezincane nezinkulu. Inezakhi:
Izazi zezempilo zincoma ukudla abantu abanesifo sikashukela 300-400 g sale berry enempilo nsuku zonke ngaphandle kokulimaza impilo.
Ngingafaka phakathi kwimenyu
Uhlobo lwesifo sikashukela sohlobo 2 yisifo esibi esidinga ukuthi isiguli silandele ngokuqinile isidlo. Lapho ukhetha imikhiqizo yemenyu, isiguli kufanele sicabangele isilinganiso saso sobumnandi ukuze singeqi ushukela ojwayelekile wosuku. Ama-Strawberry angawezithelo ezinenkomba ye-glycemic ephansi, okungukuthi, kuneglucose encane kuyo, iphuka isikhathi eside, esiza ukunciphisa inani loshukela egazini. Kungumkhiqizo obalulekile wokudla onomphumela omnene we-diuretic ne-laxative, kusiza ukwehlisa isisindo, okubaluleke kakhulu ezigulini ezinesifo sikashukela. Impela, iziguli eziningi zinesisindo ngokweqile, ezandisa inkambo yesifo. Ngakho-ke, embuzweni: kungenzeka ukuthi isifo sikashukela sidle ama-sitrobheli, kunempendulo yegama elilodwa - yebo.
Ngenkathi, amajikijolo kufanele afakwe ekudleni kwansuku zonke ukuze umzimba wesiguli wenzelwe ukusweleka kwamavithamini namaminerali adingekayo. Kubalulekile ukudla ama-sitrobheli aluhlaza, ngoba ngaphansi kwethonya lokushisa eliphakeme ulahlekelwa yimpahla yawo. Ngokugcina isikhathi eside, amajikijolo aqandisiwe. Kuleli fomu, zonke izinto eziwusizo zezithelo ziyagcinwa.
I-Diabetesology incoma ukufaka ama-sitrobheli ekudleni kwabantu abahlushwa ushukela wegazi, ngoba ucebile ezintweni ezilusizo ezibaluleke kakhulu esigulini sikashukela. I-Ascorbic acid noma uvithamini C:
kuthuthukisa ukungavikeleki kokujwayelekile kwesiguli,
kuvimbela ukukhula kwe-atherossteosis,
igaya igazi, evimbela ukwakheka kwengubo yegazi,
ukwazi ukwehlisa umfutho wegazi.
Kubalulekile! Ama-antioxidants ku-berry akhulisa imetabolism ezingeni lamaselula, anciphisa ukunqwabelana kwezinto eziyingozi emangqamuzaneni, asize amazinga aphansi kashukela, futhi awuvimbe ukuthi ukhuphuke.
Ukusetshenziswa okuhleliwe kwamajikijolo kuholela ekulahlekelweni kwesisindo, kuqeda izinqubo ezima emathunjini, ngoba kuthuthukisa i-peristalsis. Amathambo ama-sitrobheli amancane ahlanza amathumbu ngobunono, ngaleyo ndlela andise umthamo we-mucosa omncane wamathumbu. Lokhu kunomthelela ekudleni okusebenzayo kwezakhi zomzimba kusuka ekudleni kuya emzimbeni, kuthuthukisa inqubo yokugaya, ngoba isifo sikashukela sinomthelela ongemuhle kuphephabhuku lesisu, umphumela walokho okuyi-gastroparesis nokuphazamiseka okuqhubekayo kokuphuma kokudla esiswini.
Ngaphezu kwalokho, ama-sitrobheni yi-antiseptic enhle enemiphumela yokulwa nokuvuvukala. Lokhu kubalulekile kakhulu kwabanesifo sikashukela, ngoba banciphise izakhiwo zesikhumba, ngakho-ke ngisho ne-abrasion encane ingaphenduka isilonda esingapholi.
Ngaphezu kwenzuzo, i-berry ingadala ukwanda kwezifo zephephisi lesisu, ngoba linokuqukethwe okuphezulu kwama-asidi wezithelo, kanti namathambo alimaza ulwelwesi lwama-mucous lwesisu. Ngakho-ke, ama-berry akufanele adliwe esiswini esingenalutho, futhi futhi anciphise ukungena kwawo uma:
Ukudla ama-sitrobheli, umuntu kufanele acabangele iqiniso lokuthi i-oxalic acid ku-berry, ehlanganiswe ne-calcium, idala i-insoluble compound - i-calcium oxalate, evusa ukuthuthukiswa kwamathambo, i-caries, i-urolithiasis, i-cystitis noma ihaba lazo. Ngaphezu kwalokho, lo berry yi-allergen, ngakho-ke abantu abanomkhuba wokungezwani komzimba okufanele banakekele ngama-sitrobheli.
Ungawasebenzisa kanjani ama-sitrobheli
Amajikijolo angaphansi kilojoule futhi angakwazi ukugcwalisa isikhathi sokudla, enze ukudla okulula. Yile ndlela izazi zesondlo ezincoma ngayo noma yiluphi uhlobo lwesifo sikashukela ukuthi sidle ama-sitrobheli. Izithelo akufanele zidliwe esiswini esingenalutho, kepha usuku lonke zingadliwa phakathi kokudla okuyinhloko, kuhlanganiswe namabhisikidi okudla, ukulungiselela amasaladi ezithelo kuwo, kuhlanganiswe namantongomane. I-berry lwanelisa kahle isifiso sokudla, ngenxa yalokho asivumeli isiguli ukuba sidle ngokweqile, sivimbela ukukhuluphala.
Kungcono ukudla ama-sitrobheli ngendlela yabo eluhlaza, ngoba ukwelashwa okushisa kubulala zonke izinto ezizuzayo kuzo. Ukuze unikeze i-berry ukunambitheka okumnandi, uthele ngo-ukhilimu ongewona omuncu. Ijusi le-sitrobheli elimnandi nalo lilungiselelwe kusuka izithelo ezivuthiwe (ushukela alufakwa). Isihlobo sama-sitrobheni sibhekwa njengotshani bengadi. Kubuye futhi kumajikijolo angenakuthunyelwa, ngakho-ke kuvunyelwe imenyu yesifo sikashukela. Iziguli ezinesifo sikashukela sohlobo 2 zidinga ukuqapha ngokuqinile ekudleni futhi zidle ukudla okuvunyelwe kuphela. Kulokhu, udinga ukubala inani ushukela oqukethwe kukho konke ukudla okuphuzwa usuku lonke.
Isifo sikashukela sokukhulelwa
Lolu hlobo lwesifo luyatholakala kowesifazane ngesikhathi sokukhulelwa. Kungaba uhlobo lokuqala noma lwesibili. Lesi sifo siveza njengokwephula ukubonwa kweshukela ngumzimba, ngenxa yalokho izinga laso lingakhuphuka. Isifo sikashukela sokukhulelwa sikhula ngenxa yokuncipha kokuzwela kwamangqamuzana ukuya ku-insulin, okuvela ngenxa yokuqukethwe okwengeziwe kwama-hormone okukhulelwa. Imvamisa, umuntu wesifazane ukhulisa ushukela kuphela ngesikhathi sokuzala, futhi ngemuva kokubeletha uzobuyela kokujwayelekile. Kepha kunobungozi bokuthi lesi sifo ngeke sihambe futhi ushukela uzokwenyuka futhi.
Kulokhu, abesifazane abakhulelwe badinga ukubhekisisa izondli zabo, banciphise ukudla okumnandi. Ungadla ama-sitrobheli, kepha ngesilinganiso esilinganiselwe, ngoba kungumkhiqizo ongahambisani nakho futhi kuqukethe novithamini C omningi, ongathinta kabi inkambo yokukhulelwa. Ukwazi ukuthi i-berry isebenza kanjani emzimbeni, udinga ukudla izithelo eyodwa noma ezimbili futhi uqaphele isimo sakho. Uma i-berry lingakhuphi izinga likashukela, futhi futhi akukho okunye ukusabela okungekuhle komzimba, ungakungeza ekudleni kwakho.
Kubalulekile! Mangaki ama-sitrobheli angadliwa phakathi nosuku azotshela i-gynecologist, kepha imvamisa akuvamile ukudlula ku-250-300 g.
Ngokudla kwe-carb ephansi
Ukudla okunjalo akufaki ukudla okuqukethe ama-carbohydrate “asheshe”, isitashi, amafutha, ufulawa noju. Izazi zezempilo zitusa ukudla lolu hlobo lokudla kubantu abakhuluphele. Ekudleni kweziguli ezinjalo, i-kiwi, i-avocado, i-grapefruit, ama-sitrobheni, okungukuthi, izithelo namajikijolo anenkomba ephansi ye-glycemic, kufanele kube khona. Balawula izinga likashukela futhi banelisa umzimba ngamavithamini namaminerali adingekayo.